Boordiin Filannoo gaaffii Sidaamaaf mirga hiree ofiin murteeffannaa baatii shan keessatti gaggeessuuf jiraachuu ibse. - BBC News Afaan Oromoo
Ibsa gaaffii Sidaamaan naannoo ta'uudhaaf gaafachaa ture irratti baaseen Boordiin Filannoo Biyyaalessaa Itoophiyaa rifeerndamiin bu'uura seeraa jiruun baatiiwwan shan dhufan keessatti gaggeessuuf qophiirra akka jiru beeksiseera.
Ibsa kana waabefachuun FBCn akka gabaasetti gaaffiin Sidaamaa naannoo ta'uuf akka rifereendamiin gaggeeffamuuf gaafate karaa mana maree naannoo Kibbaatiin Boordichaaf kan dhiyaate Sadaasa 12/2011 A L I yommuu ta'u, akka Heera mootummaa keewwata 43/3/B/ kan naannichaaf kenname "guyyaa gaaffiin sun dhiyaaterraa jalqabee waggaa tokko" yeroo gurmaa'uuf barbaachisu Boordichaafis hojiirra kan ooludha.
Kana waan ta'eefis, bu'uura Heera mootummaatiin yeroo kenname dhumachuudhaaf kan hafe baatiiwwan shan keessatti rifereendamii (murtee ummataa) gaggeessuudhaaf qophii duraa taasisaa jira.
Ibsichi Boordiin Filannoo Biyyaalessaa akka haaraatti of gurmeessuun, wixinee seeraa aangoofi itti gaafatama Boordii Filannoo murteessu qopheessuun bakka bu'oota ummataan raggaasisuun, seerawwan filannoo foyyeessuuf, sochiiwwan addaa addaa akka dhaabbataatti jijjiirama fiduu gara garaa taasisaa turuu ibseera.
Hojiiwwan boordicha akka haaraatti gurmeessuufi seerawwan barbaachisa guutachuudhaan baatii tokko darbe erga hojiitti seenaa hojiiwwan rarra'anii jiran gara raawwachuutti seeneera.
Hojiiwwan hedduu rarra'anii jiraniifi atattamaan deebii argachuu qaban keessaa tokko gaaffii Sidaamaa naannoo ta'uudha.
Gaaffii Sidaamaa naannoo ta'uu kanas xiyyeeffannoo ol aanaan ilaalaa akka jirus yaadachiiseera ibsichi.
Riifarandamii kan raawwatamu fedhiifi murtoon uummataa karaa seera qabeessaafi bilisa taheen kennamuu isaa mirkaneessuufi. Kanaafis, boordichi riifarandamii raawwachuuf qophiin taasisu,-Qajeelfama adeemsi sirni riifarandamii itti taasifamu qopheessuu.-Karoora yeroofi bajata waliigalaa riifarandamichaa qopheessuu-Qophii riifarandamiifi adeemsa sagalee keennuu irratti haala nageenyaa eegsisuuf humna qindeessuufi karoora raggaasisuu.-Qaama walabaa filannoo raawwachiisu qopheessuu, leenjisuufi bobbaasuu.-Qooda fudhattoota waliin waltajjii waliinii qopheessuufi karoora raawwii baasuu.-Adeemsa riifarandamicha raawwachiisuu irratti marii waloo taasisuufi karoora baasuun raawwachuu.-Meeshaalee sanadaa qopheessuufi hojii maxxansaa raawwachuu.-Waraqaa sagaleen ittiin kennamu qopheessuu, maxxansuufi raabsuu.-Riifarandamii raawwachiisuu.-sagalee lakkaa'uufi bu'aa beeksisuu.Kanneen yoo tahan, qaamoleen qooda fudhatan immoo qophii isaan irraa eegamu raawwachuu qabu.
Manni maree naannoo saba,sablammoota fi uummattoota kibbaa mootummaa naannichaa fi bulchiinsa godinichaa waliin mari'achuun ammatti Hawaasaan magaalaa guddoo naannichaa fi Godinichaa ta'un akka tajaajiltu, bu'aa sagalee uummanni mirga hiree ofiin murteeffanaa kan mirkaneessuu yoo ta'e, magaalicharratti qaamoleen lachuu mirgi qabanii fi dhimma qoodinsa qabeenyaan walqabatu sirna ittin simatan qopheessanii boordichaaf akka dhiyeessan.
Labsii 532/1999 akkaata keeyyata107 irratti labsii waltumsuu ilaalchise, nageenya fi tasgabbii eegsisuurratti poolisiin Fedeeraalaa, Poolisiini naannoo fi Godinaa waltumsanii akka hojjatan karoora baasani boordicha waliin akka hojjatan.
Manni MareeNaannoo Kibbaa miseensi saba ,sablammoonni biroo godincha keessa jiraatan mirga hiree ofiin murteeffannaa booda eegumsa mirgi wabii seeraa qabun akka qopha'uu fi bordichi murteessera.
Qamooleen dhimmichi isaan ilaallatus amma Adolessaa 19 bara 2011 A.L.I tti barreeffan deeebii akka waamicha dhiyeesse.Boordiin filannnoo biyyaaleessa itti gaafatamummaa heera fi labsii boordichaan itti kenname akkaata qajeelfama filannoo itti kennameen itti gaafatamummaasaa bahuuf hojjachaa jiraachuu ibsa.Boordiin filannnoo biyyaaleessa Adooleesaa10 bara 2011 A.L.I
Dubartoota Tarkii: "Nu hin ajjeesiinaa!"